Football Khabar » एथ्लेटिकोले बार्सिलोनाबाट २०० मिलियन लिएरै छाड्ने !
एथ्लेटिकोले बार्सिलोनाबाट २०० मिलियन लिएरै छाड्ने !
फ्रेन्च फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यानको अनुबन्धको विषयलाई लिएर एथ्लेटिको मड्रिड र बार्सिलोनाबीच टकरावको स्थिति सिर्जना भएको छ । एथ्लेटिकोका प्रमुख इनरिके केरेजोले बार्सिलोनाले धोकापूर्ण अवस्थाबाट ग्रीजम्यान लगेको भन्दै कानुनी लडाइँ लड्नसमेत पछि नहट्ने दाबी गरेका छन् ।
अघिल्लो दिन बार्सिलोनाले एथ्लेटिकोका फ्रेन्च खेलाडी ग्रीजम्यान अनुबन्धको घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि बार्सिलोनाले एथ्लेटिकोले तोकेको १२० युरो मिलियन रिलिज क्लज मूल्य तिरेको थियो । तर, एथ्लेटिको भने बार्सिलोनाले धोकापूर्ण अवस्थाबाट आफ्ना खेलाडी अनुबन्धको घोषणा एकतर्फी रूपमा आरोप लगाएका छन् ।
अघिल्लो दिन बार्सिलोनाले ग्रीजम्यान अनुबन्धको घोषणा गरेको एक घन्टा निबत्दै एथ्लेटिकोले एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर बार्सिलोनाले आफूहरूलाई २०० मिलियन युरो तिर्नुपर्ने दाबी गरेको थियो । केही समयअघि मात्रै दुई क्लबबीच ग्रीजम्यानको रिलिज क्लज २०० मिलियनबाट १२० मिलियनमा झार्ने सहमति भए पनि खेलाडी अनुबन्ध दुई क्लबको समझादारीबाट मात्रै हुने सहमति बनेकोमा बार्सिलोनाले एकतर्फी रूपमा खेलाडी अनुबन्ध गरेको भन्दै एथ्लेटिकोले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
ग्रीजम्यान बार्सिलोनाको खेलाडी भइसकेपछि एथ्लेटिकोका अध्यक्षले मिडियासँग कुरा गर्दै बार्सिलोनाबाट आफूहरूले २०० मिलियन लिएरै छाड्ने र सो रकम माग गर्न आफूहरूसँग पर्याप्त आधार रहेको पनि बताए । ‘हामी ग्रीजम्यानका लागि बार्सिलोनाबाट २०० मिलियन युरो माग गर्छौं । त्यसका लागि हामीसँग प्रशस्तै प्रमाण छन्,’ केरेजोले भने ।
उनले अघि थपे, ‘हामी बार्सिलोनाको यो हर्कतबाट निकै बेखुसी छौं । उनीहरूले ला लिगाको कार्यालयमा रकम बुझाएर हाम्रा खेलाडी लिएको घोषण गरे । हामीले ग्रीजम्यानका लागि उचित मूल्य नपाए कानुनी लडाइँ लड्छौं ।’
प्रकाशित मिति २८ असार २०७६, शनिबार ११:५०